Izimvo zokuGuqula umxholo ube ziGuquko | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 14, 2013 NgeCawa, Oktobha 13, 2013 Douglas Karr
Ukuba awuzange uve nge Ukusebenzisana kwe-ion, kufuneka ubakhangele. Ayisiyiyo kuphela into enesoftware esekwe kwiwebhu yokudala kunye nokuvavanya amava okufika asempilweni, ikwabonelela ngeetoni zokuxhasa idatha kunye neendlela ezilungileyo zamashishini. Bathetha kwimisitho emininzi kwilizwe liphela kwaye bahlala bebonelela ngomxholo omkhulu. Le infographic ayifani:
Isalathiso esikhawulezayo sokwenza uninzi lomxholo wakho ngamaphepha okufika. I-infographic ibonisa amaqhinga alithoba awodwa okwenza imali kwiiblogi, amaphepha amhlophe, infographics kunye neesilayidi zokukhokelela kwisizukulwana esikhokelayo.
Unomdla wokufunda ngakumbi? Bhalisa ukuze ufumane iphepha le-ion elinamaphepha ali-15 aMhlaba wokuFikelela kwiNqaku leNgcaciso yokuThengisa. Fumana ukungena nzulu kwiindlela ezili-9 ezigutyungelwe kwi-infographic ephathekayo, enokukhuphela .pdf.
tags: umxholo wokuthengisa izimvoguqukaionUkusebenzisana kwe-ioniikhontrakthi zephepha lokufikaIingcamango zephepha lokufikamaphephaiintlobo zamaphepha okufika